Kuligood Qaar Sii, Qaarna Dhammaan Way Siiyeen. Mahadsanid. | Martech Zone
Kuligood Qaar Sii, Qaarna Dhammaan Way Siiyeen. Mahadsanid.
Talaado, Nofeembar 11, 2008 Khamiista, Noofembar 13, 2008 Douglas Karr
Baaq uu soo saaray Madaxweynaha Mareykanka
Maalinta Halyeeyada, waxaan ku xurmeynaa u adeegida iyo u huridda ragga iyo dumarka difaaca difaaca xorriyadeenna ay si geesinimo leh u xirteen labiska Mareykanka.
Laga soo bilaabo beeraha iyo kaymaha Yurub ee dagaalladu aafeeyeen ilaa hawdka Koonfur-bari Aasiya, laga bilaabo lamadegaanka Ciraaq ilaa buuraha Afgaanistaan, waddaniyiin geesiyaal ah ayaa ilaaliyay himilooyinka Qarankeenna, waxay ka badbaadiyeen malaayiin madax-bannaanida, waxayna gacan ka geysteen ku faafidda xorriyadda adduunka. Halyeeyadii Mareykanka waxay kajawaabeen wicitaankii markii la waydiiyay inay ka difaacaan qarankeena qaar ka mid ah kuwa ugu xun ee naxariis darada ah, argagixisada, iyo militariga aduunka waligiis lagu yaqaan. Waxay istaageen iyaga oo wajahaya khatar aad u weyn waxayna ummaddeena u suura galisay inay noqoto xoogga ugu weyn ee xorriyadda taariikhda aadanaha. Xubnaha Ciidanka, Badda, Cirka, Marines-ka, iyo Ilaalada Xeebaha waxay kajawaabeen wicitaan sare oo loogu adeegayo waxayna gacan ka geysteen sugida amniga Mareykanka markasta.
Dalkeennu weligiis wuxuu abaal ugu hayaa halyeeyadeenna geesinimada aamusan iyo adeegga ku dayashada mudan. Waxaan sidoo kale xasuusnaa oo maamuusnaa kuwa naftooda u huray difaaca xorriyadda. Ragga iyo haweenka geesinimada leh waxay sameeyeen allabarigii ugu dambeeyay ee danteenna. Maalinta Halyeeyada, waxaan ku xasuusanaa geesiyadan geesinimadooda, daacadnimadooda, iyo dadaalkooda. Naftood hurayaashoodu waxay sii wadaan inay na dhiirrigeliyaan maanta markaan ka shaqeyneyno horumarinta nabadda iyo fidinta xorriyadda adduunka.
Iyada oo la ixtiraamayo lana aqoonsanayo tabarucaadka xubnaheenna adeegga ay ka geysteen nabadgelyada iyo xorriyadda adduunka oo idil, Shirweynuhu wuxuu bixiyey (5 USC 6103 (a)) in Nofeembar 11 ee sannad kasta loo qoondeeyo sharci ahaan fasaxa dadweynaha si loo sharfo halyeeyadii Mareykanka.
HADDA, SIDAAS DARBAR, aniga, GEORGE W. BUSH, Madaxweynaha Mareykanka Mareykanka, waxaan halkan ku ogeysiinayaa Nofeembar 11, 2008, inay tahay Maalintii Halyeeyada waxaanna ku boorinayaa dhamaan dadka Mareykanka inay ilaaliyaan Nofeembar 9 illaa Nofeembar 15, 2008, oo ah Toddobaadka Wacyigelinta Halyeeyada Qaranka. Waxaan ku dhiiri galinayaa dhamaan dadka reer Mareykan inay aqoonsadaan geesinimada iyo allabariga halyeeyadayada xafladaha iyo ducooyinka. Waxaan ugu baaqayaa saraakiisha Federaalka, Gobolka, iyo kuwa maxalliga ah inay muujiyaan calanka Mareykanka iyo inay taageeraan kana qeyb qaataan howlaha waddaninimo ee ka socda beeshooda. Waxaan ku martiqaadayaa ururada bulshada iyo kuwa walaalaha ah, goobaha cibaadada, iskuulada, meheradaha, ururada shaqaalaha, iyo warbaahinta inay ku taageeraan xuskaan qaran muujinta iyo barnaamijyada xuska ah.
SHARCIGA SHAQO, waxaan halkan gacanteyda ugu taagay maalintan soddon iyo kow ee Oktoobar, sanadka Rabbigeenna laba kun iyo siddeed, iyo Xorriyadda Mareykanka ee laba boqol iyo saddex iyo soddon.
Tags: radioxiriiriyeyaasha slideshareSlingshot SEO
Ishu waxay leedahay hubi higgaade